Galmada naagta duqda ah waa sidee dhib ma leedahay oo cuduro malaga qaadaa - Hablaha Media Network
HMN:- Galmada naagta duqda ah waa sidee, Naagaha duqda ah waxaa loola jeedaa naagta 65 shan dhaaftay, naagta marka ay da’dan gaarto dareenka kacsiga aad buu uga yaraanaa, cambarkeeda wuxuu noqonayaa mid qallayl ah oo aan dhacaan lahayn, sidoo kale qaabkiisa wuxuu yeelanayaan maqaar kaduudan, qurux ahaan ninka ma soo jiidan karto, iyadoo sidaas ay tahay ayaa haddana laga yaabaa inay qooq keento naagaha qaar ayaa sidaas ah, habraha duqa ah qaarkooda waxay rabaan nin yar waxay gaad gaadaan raga da’da yar 25 jirka ah ama 18 jirka ah, kuwaas oo kacsigooda aan damin waayo wali way yaryihiin, marka waxaa su’aal mudan
naagta weyn ninka yar dhib miyay u keenaysaa ?
soomaali waxay dhahaan habarta neefteeda uma roona wiilka yar sidoo kale lafaha ayay ka burburinaysaa haddii uu galmo la sameeyo cunug yar naag weyn, taas waxaa la dhihi karaa naagta inta badan marka ay da’daas gaarto cuduro ayay qabtaa kala duwan, waxaa laga yaabaa inay cudur leedahay oo marka ay u soo gudbiso wiilka yar oo ay ka rabto raaxada, sidoo kale galmada waxay ka mid tahay waxyaalaha ugu sahlan oo cudurka la isaga qaado, siiba glmada futada.
naagaha waaweyn maka helaan ragga yar?
aad bay uga helaan gabraha da’da ah nimanka yaryar, waayo ninka yar wuxuu leeyahay malabyarow oo adag markuu kaco, naagta da’da ah haddii ay tahay naag qooq badan waxay leedahay midkan ayaa kuu raaxayn kara, si fiican ayay ugu dhigaysaa, teeda kale foorar ayay rabaan qaarkooda, si fiican in loogu garaaco geedka.
Marka qofka haddii uu guursado naag duq ah oo caafimaadkeeda buuxa galmo hadduu la sameeyo wax dhib ah uma keenayso, waayo caafimaadka ayay ku xiran tahay.
ninka siduu ugu kacsan karaa naagta weyn?
raga isku mid ma aha xagga dareenka naagta weyn rag badan ma soo jiidato waayo naasaheeda balaq ayay noqdeen iyo maqaar sidoo kale cajiraheeda waa maqaar dabadana waa la mid rag badan uma kacsadaan, laakin way jiraan rag ku waalan kacsiga oo naag duq xitaa aan ka fakanin.